Kismaayo : Nin la sheegay inuu gaarigiisa qarax ugu xiray wasiir ka tirsan Maamulka Jubba oo lasoo bandhigay.” Daawo” – Gedo Times
Ciidamada Nabad Suggida Maamulka Jubbaland, ayaa Magaalada Kismaayo, waxa ay ku soo bandhigeen ninkii ka dambeeyay Qaraxii lagu xiray gaari uu leeyahay Wasiirka Arimaha Bulshada Maamulka Jubbaland Macalin Maxamed oo 17-kii Bishan gaarigiisa miino loogu xiray.
Ninka Qaraxa ku xiray Gaariga oo magaciisa lagu sheegay Cabdi Khadar, ayaa waxaa adeer u ah Wasiirka Arimaha Bulshada Maamulka Jubbaland Macalin Maxamed, hayeeshe wuxuu ka tirsanaa Ninkaan Kooxda Shabaab oo wada shaqeyn hoose uu la lahaa.
Cabdi Khadar oo ka sheekeeyay qaabka gaariga uu qaraxan uu ugu xiray, ayaa sheegay in Miinada loo keenay Afar Saac Subaxnimo, islamarkaana uu ku xiray gaariga Sideed Saac Galabnimo.
Cabdi Khadar, ayaa sheegay in Shabaabka ay u balan qaadeen lacag badan inay siinayaan, hadii uu ku guuleysto in Qaraxa uu si wanaagsan ugu xiro gaariga Wasiirka.
Waxa uu sheegay nin ka tirsan ciidamada Booliska Jubbaland oo isagana wada shaqeyn la leh Ururka Al Shabaab uu u yimid uuna weydiiyay in gaariga uu ku xiray Qaraxa, kadibna uu u sheegay inuu ku xiray Qaraxa, waxaana Cabdi Khadar loogu tuuray Moobeelkiisa lacag dhan $50 Doolar.
Tani ayaa muujinaysa in Shabaabka ay adeegsadaan dadka ka agdhaw Wasiirada iyo masuuliyiinta, ayna u balan qaadaan inay siinayaan qarash badan si ay u fuliyaan falka Shabaab ay doonayaan.
XOG : Sharif Sakiin iyo Wasiirka arimaha Dibadda ee Itoobiya oo kulan NQarsoodi ah yeeshay……???